Dhawaaqii Dool Iyo Cirro Qore Mukhtar Cilmi
Thursday May 20, 2021 - 18:30:47 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dhawaaqii Dool Iyo Cirro Qore Mukhtar Cilmi Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabarakaato.Waxaan salaamaya dhamaan bahweynta warbahiinta somaliland.
Umadd walba markay wax dooranayso xisbi amba musharax waxay eegtay kartidiisa iyo hadafkiisa may is gaadhi karaan?,yaa laga xanaaqin kulmiye 10 sanno u hayeye xukunka somaliland wax badan bay qabteen maamul iyo dhaqaale ba, lama xaqiri karo,halka u ina dool iyo cirro iyo waddani ku dhawaaqayeen shalay in maanta xisbigi is nadiifinayo oo ha nala saxo 2021!!. Goormay tahay ma imika markuu xisbigu gali laha doorasho 10 cisho ka hadhsan tahay?!!!, waryaadheheen dee sidan siyaasad maaha iyo hab dhaqan xisbi toona!.
Cismaan cumar dool wuxuu laha haa soo laabtaan taageeryaashe waddani ee dhaqaalaha bixin jiray belwalba ee dhididkooda ee qurbaha kasoo saarta,maa meel bela maamul ayay lacagtooda dib u galin doonaan?! No no ina doolow sxb ,dadkii way daalin musuq maasuq lacagtooda lagu cuno na diyaar uma ahaa ee xijista idinka maanta halkaa is dhigay qadiyaadii waddani na ku ciyaaray!!.
Maa xuma in lays toosiyo lkn meeshu markay noqoto kooxisi iyo qabyaalad iyo habel iska ilaaliya oo waxaas udhan la xakamiin kari wayey qofku wakhtigiisa dib danbe khasaarin maayo, dhaqaale ku soo rabcayna galin maayo meel bela maamul ah.waa in la xakamiya waxyaabo badan oo u baahan in la nadiifoyo canaasir farabadan. cismaan cumar doolow hadalku ma ku galay oo ma dhuuxday suldaan !.